Heshiis aan loo dhameyn oo laga soo gaaray Shirka Dhuusamareeb 3 | KEYDMEDIA ONLINE
Heshiis aan loo dhameyn oo laga soo gaaray Shirka Dhuusamareeb 3
Villa Soomaaliya ayaa Caawa kasoo saartay Shirkii Dhuusamareeb 3 War-Murtiyeed, kuna sheegtayna in ay DFS iyo Maamul Goboleedyada ay gaareen heshiis dalku u horseedo doorasho hufan.
War-Murtiyeedkaan oo soo baxay maalinta Arbacadda 19.08.2020 ayaa dhaliyay Su'aallo badan oo mugdi ah, wuxuuna u egyahay wax muddo hore la isku afgartay.
"Waxaan caawa heshiis doorasho kula gaarnay magaalada Dhuusamareeb Dowlad Goboleedyada & Gobolka Banaadir kaasoo aan rajaynayno inuu dalku u horseedo doorasho hufan, xisbiyo badan oo waqtigeeda ku dhacdo. Gacan ayaan u fidinaynaa walaalaha naga maqanaa intii aan hawshan ku jirnay."
7. Guddiga Madaxabanaan ee Doorashooyinak Qaranku-GMDQ waxay kuraasta lagu asteeyey deegaan doorashooyin aan amni ahayn u wareejin karaan deegaan doorasho kale.
9. In qorsheynta iyo fulinta doorashada looga danbeeyo Guddiga Madaxabanaan ee Doorashooyinka Qaranka iyagoo kaashanaya Maamulka Dowlad Goboleedyada iyo Bulshada rayidka ah.
Mudane: Maxamed Cabdulahi Maxamed Farmaajo______________________
Mudane: Ahmed Cabdi Kaariye-Qoorqoor______________________